အေးချမ်းမြေ့| January 9, 2013 | Hits:4,779
kevin January 10, 2013 - 12:23 am Nobody has the right to sell the historical heritage & even from the government. These flights are used to bomb over burma during british colony which rule us for almostacentuary giving fears, tears and blood sheddings. So can we replace those sacrifices from our forefathers including general aung san with this money? How stupid heads! We cannot allow to sell it for any reason but can borrow to british museum with the condition like burma reserving its true ownership. I think it is radiculous to sell these planes to this american for just money . These are not for sale but for national heritage. Shame on you u thein sein !!
Reply ဒို့ဘိုးဘွားအမွေမို့ ဒို့ ပိုင်ရမလေ။ January 10, 2013 - 2:18 am အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ ဘယ်လိုရမှာလဲ။ လေယာဉ်တွေကို တဦးဦးက ၀ယ်မှာမို့လား။ ဒါမှမဟုတ် .. ဒါမှမဟုတ် .. ဟဲဟဲ..သိတယ်နော်။ ဘာတွေမြှုပ်ထားသလဲဆိုတာ။ ရိပ်မိပြီ ဟုတ်။ လေယာဉ်ပျံတွေကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံး မြန်မာနိုင်ငံကပိုင်တယ်။ ဦးထူးထူးဇော်လည်း မပိုင်ဘူး။ဗြိတိန်လည်းမပိုင်ဘူး။
Reply ဗမာ January 10, 2013 - 10:11 am “”လေယာဉ်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများအားလုံး လုပ်ဆောင်ပြီးလျှင် ရရှိလာသည့်အကျိုးအမြတ်ကို မြန်မာအစိုးရက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရွှေတောင်ပေါ် ကုမ္ပဏီက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လေယာဉ်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိနေသော Mr. David Cundall က ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ခံစားခွင့်ရမည်ဟု သဘောတူ စာချုပ်တွင် ပါရှိသည်။”"
မသိလို့မေးချင်ပါတယ်။ အကျိုးအမြတ်ဆိုလို့ လေယာဉ်တစ်စီးတန်ဖိုးကဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားတယ် ဆိုတာမပါဘူးနော်။ တော်တော်ကြာ တွေ့ပြီးကာမှ လေယာဉ်တွေက ဟောင်းနေလို့ အသုံးမ၀င်တော့လို့ပါဆိုပြီး တစ်စီးကိုဒေါ်လာတစ်ရာနဲ့ဈေးဖြတ်နေမှဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်။ ပြီးတော့အဲဒါတွေကို ဘယ်မှာသုံးမှာလည်း။ Reply တခြားဖတ်စရာများ